ရတနာဝါသဘုရားကျောင်း 華緬 三寶寺: စက္ခုပါလမထေရ်၏ ဝတ္ထု The Story of Thera Cakkhupala 瞎子尊者的故事
စက္ခုပါလမထေရ်၏ ဝတ္ထု The Story of Thera Cakkhupala 瞎子尊者的故事
ယမကဝဂ်၊ ဂါထာ (၁) YAMAKA VAGGA – 雙品篇 – VERSE 1.
ယမကဝဂ်၊ ဂါထာ (၁)
Manopubbangama dhamma , manosettha manomaya
manasa ce padutthena , bhasati va karoti va
tato nam dukkhamanveti, cakkamva vahato padam.
Mind is the forerunner of (all evil) states. Our life is the creation of our mind. If one speaks or acts with impure mind, suffering follows one as the wheel of the cart follows the draught-ox that draws the cart.
ချစ်သားရဟန်းတို့ လွန်လေပြီးသောအခါ ဗာရာဏသီပြည်၌ ဗြဟ္မဒတ်မင်းကြီးသည် မင်းပြုလတ် သည်ရှိသော် ဆေးသမားတစ်ဦးသည်ရွာ နိဂုံးဇနပုဒ်တို့ကို လှည့်လည်လျက် ဆေးကုသခြင်း အမှုကိုပြုရာ ထိုအခါ စက္ခုရောဂါဖြင့်ပြင်းစွာဖိစီး အားနည်းသော မိန်းမတစ်ယောက်ကို တွေ့မြင်၍ အသင်အား အဘယ်သို့သော မချမ်းသာခြင်းဖြစ်သနည်းဟု မေး၏။
အရှင် ကျွန်တော်မသည် မျက်စိရောဂါတို့ဖြင့် မမြင်ပါဟု ပြောလျှင် အသင်အား ငါသည် ဆေး ကုသခြင်းအမှုကို ပြုအံ့ဟုဆို၏။ အရှင် ဆေးကုသခြင်းငှာ စွမ်းနိုင်လျှင် ကုမပါဟု တောင်းပန်၏။ ဆေးဆရာကလည်း အသင့်ကို ကုမသည်ရှိသော် ငါ့အား ဆေးခကိုပေးလတ္တံ့လောဟုမေးက အရှင် အကယ်၍ အကျွန်ုပ် မျက်စိကို ပကတိ ထင်မြင်အောင် ကုစားခြင်းငှာ စွမ်းနိုင်ပါအံ့။
အကျွန်ုပ်သည် သားသမီးတို့နှင့်တကွ အသင်၏ ကျွန်အဖြစ်ကို ဖြစ်ပါစေလော့ဟု ဝန်ခံ၏။ ဆေးဆရာကလည်း ကောင်းလှပြီဟု နှစ်သက်၍ ထက်မြက်သောဆေးကို စီရင်၍ ပေး၏။ ထိုမိန်းမသည် တစ်ကြိမ်ခတ်ကာမျှဖြင့် ပကတိသော မျက်စိတို့သည် ဖြစ်လေကုန်၏။
ထိုမိန်းမလည်း ငါသည် သားသမီးနှင့်တကွ ကျွန်ဖြစ်ပါအံ့ဟု ဆေးဆရာအား ဝန်ခံ၍ ထားမိ၏။ ထားတိုင်းတစေ ကျွန်ဖြစ်၍နေက သိမ်မွေ့နူးညံ့သော စကားဖြင့် ပြောကြားခိုင်းစေခြင်း မဖြစ်လတ္တံ့။ ဆေးဆရာအား လှည့်ပတ်တော့အံ့ဟု ကြံပြီးမှ ထိုခဏ၌ ဆေးဆရာသည် လာ၍ နှမ သင်၏ ရောဂါဝေဒနာသည်အဘယ်သို့ ရှိလေသနည်းဟု မေးလေ၏။ အရှင် ရှေးအခါ၌ မျက်စိရောဂါသည် အနည်းငယ်သော ထိုးကျင့်နှိပ်စက်ပါသည်။
ယခုမူကား ရှေးကထက် တိုး၍ ထိုးကျင့် ကိုက်ခဲပါသည်ဟု ပြောလျှင် ဆေးဆရာသည် “ဤမိန်းမကား ငါ့ကို တစ်စုံတစ်ခုသော ဆေးခကို မပေးလိုသောကြောင့် လှည့်ပတ် ပြောဆိုလေသည်။ ထိုသူပေးအပ်သော ဆေးခဖြင့် ငါ့အား အဘယ်မူအံ့နည်း။ ယခုအခါ ထိုသူကို မျက်စိကန်းအောင် ပြုအံ့” ဟု ကြံပြီးလျှင် အိမ်သို့ပြန်၍ မိမိမယားအား အကြောင်းကို ပြန်ကြား၏။
မယားလည်း တိတ်တဆိတ်နေလျှင် ထိုဆေးဆရာသည် တစ်ခုသောဆေးကို ရှာကြံစုဆောင်း ထောင်းထုဖော်စပ်၍ ထိုမိန်းမ၏ထံသို့ တစ်ခုသောဆေးကို ရှာကြံစုဆောင်း ထောင်းထုဖော်စပ်၍ ထိုမိန်းမ၏ထံသို့ သွားပြီးလျှင်နှမ ဤဆေးကို ကွင်းလော့ဟု ပေး၍ ဆေးကို ကွင်းစေ၏။ ဆေးကို ကွင်းကာမျှဖြင့်ထိုမိန်းမအား နှစ်ဖက်သော မျက်စိတို့သည် ဆီမီးလျှံကဲ့သို့ ကွဲပျက်ကုန်၏။
ထိုဆေးဆရာသည် ယခုအခါ စက္ခုပါလမထေရ် ဖြစ်လာ၏ဟု ဇာတ်ကိုပေါင်းတော်မူပြီးမှ ချစ်သားရဟန်းများတို့ ထိုအခါ ငါ့သားတော်ဖြစ်သော စက္ခုပါလသည် မိမိပြုအပ်သော မကောင်းမှုကံသည် မိမိသို့ အစဉ်တစိုက် နောက်မှ လိုက်သည်ဖြစ်၍ ယခုဘဝ၌ မျက်စိကန်းခြင်း ဖြစ်ရလေသည်။
On one occasion, Thera Cakkhupala came to pay homage to the Buddha at the Jetavana monastery. One night, while pacing up and down in meditation, the thera accidentally stepped on some insects. In the morning, some bhikkhus visiting the thera found the dead insects.
They thought ill of the thera and reported the matter to the Buddha. The Buddha asked them whether they had seen the thera killing the insects. When they answered in the negative, the Buddha said, “Just as you had not seen him killing, so also he had not seen those living insects.
Besides, as the thera had already attained arahatship he could have no intention of killing and so was quite innocent." On being asked why Cakkhupala was blind although he was an arahat, the Buddha told the following story:
Cakkhupala wasaphysician in one of his past existences. Once, he had deliberately madeawoman patient blind. That woman had promised him to become his slave, together with her children, if her eyes were completely cured. Fearing that she and her children would have to become slaves, she lied to the physician.
She told him that her eyes were getting worse when, in fact, they were perfectly cured. The physician knew she was deceiving him, so in revenge, he gave her another ointment, which made her totally blind. Asaresult of this evil deed the physician lost his eyesight many times in his later existences.
Posted by YATANAVASA at 12:49 PM
Labels: ဓမ္မပဒ၊ ဝတ္ထု